Isiraely: Miresaka Amin’ny Mpamily Fiarakaretsaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jolay 2017 15:59 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, Español, Italiano, عربي, বাংলা, English
(Marihina fa tamin'ny 24 Martsa 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Palestiniana any Israely monina ao Acre i Rasha Helwa (milaza ny tenany ho mponina ao Palestina izy), izay nanoratra andian-tsoratra fohy tao amin'ny bilaoginy Zaghroda mitantara ny zavatra tsapany nandritra ny fandehanany fiarakaretsaka itambarana sy nilaza ny maha zava-dehibe ny fiteny – Arabo na Hebreo – izay nosafidian'ny mpamily mba hifandraisana.
Ao amin'ny lahatsorany voalohany, manontany tena i Rasha hoe:
Nahoana no mora tezitra foana ny mpamily fiarakaretsaka?
Ary nahoana ny mpamily fiarakaretsaka Arabo iray rehefa miresaka amin'ny mpiara-miasa aminy, izay Arabo ihany koa , no miteny aminy teny hebreo?
Ary nahoana ireo mpamily Arabo no mandefa mozika na vaovao foana amin'ny teny hebreo?
Ary nahoana aho no miresaka foana amin'ny mpamily amin'ny teny Arabo rehefa mitaingina taxi?
Fa nahoana àry izy no mamaly ahy amin'ny teny hebreo?
Ary nahoana aho no mihevitra foana fa ny mpamily fiarakaretsaka Jiosy no mahazo aina kokoa ?
Fa nahoana àry moa no manantena zavatra hafa foana aho?
Ao amin'ny lahatsoratra faharoa, mitantara ny zava-nitranga manokana izy:
Omaly raha niala tao Haifa aho ho any Acre, nandeha fiarakaretsaka mazava ho azy … ary niaraka tamin'ny mpamily Arabo .
Nisy ankizivavy zarazara hoditra nitaingina niaraka taminay teny an-dalana, ankizivavy avy ao Acre izy raha ny fahazoakao ny fiteniny.
Raha vao niditra ny fiarakaretsaka izy dia tsy mahatam-bava ( toy ny hoe ny tao am-pony, sy izay tao am-bavany !). Ary nanontany (ny mpamily) miaraka amin'ny lantom-peo mafy hoe: “Nahoana no ataonao ny amin'ny teny hebreo ny vaovao ? Indray mandeha koa ianao nandefa hira tamin'ny teny hebreo, inona no dikan'izany?”
Mbola tony ilay mpamily Arabo ary namaly azy toy ny niheverana azy hoe: “Raha niala avy any Acre isika ho any amin'ny tanànakely Al Maker [any atsinanan'i Acre], dia hira tamin'ny teny Arabo no nalefako … Fa tsy mandeha izany raha eo anelanelan'i Haifa sy Acre! “
Namaly azy avy hatrany ilay tovovavy zarazara hoditra : “Izany no antsointsika hoe fahalemen-toetra.”
Samy nanana ny teniny an-tapitrisany maro hafa tao an-tsainy avy ny olona tsirairay ankoatra ity fehezanteny iray izay nolazainy ity sady nampiaiky . Izaho kosa , nihomehy tao am-poko.
Ao amin'ny lahatsorany fahatelo , tsy mbola namaly i Rasha :
Androany, somary namovoka ny rivotra iainana.
Niala tao Haifa aho ho any Acre, nandeha fiarakaretsaka mazava ho azy.
Tsy afaka namaritra aho hoe iza ilay mpamily .
Angamba satria tsy niresaka tamin'ny mpandeha izy.
Angamba satria tsy nivazavaza ahy na tamin'ny mpamily iray hafa izy .
Angamba satria nandefa mozika tsy nisy tononkira izy .
Ary angamba satria efa sahirana tamin'ilay mozika ny eritreritro mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra.